▷ Waxaan horayba u ognahay sida Apple ugu fiicnaan doonto hubaal la'aanta - 【 TechRadar 】 2022
Waxaan horeyba u ognahay sida Apple u kobcin doono hubaal la'aan
Sicir barar ba'an, silsilado sahayda oo jabay, iyo xoog shaqaale teknoloji ah oo ay carqaladeeyeen saamaynta cudurka faafa ee COVID-19, waa maxay ganacsi caqli-gal ah in la sameeyo? Waxaan horeyba u ognahay waxa Apple sameyn doono: raac hal-ku-dhegga aasaasaha Steve Jobs, hoos u dhig madaxeeda tusaalaha oo "wax cusub ku soo kordhin" waqtiyada aan la hubin.
1 Marka socodku adkaado...
2 Dib u fakaraynta beerta gidaarada leh
3 Adeegyada dib u curinta
4 Baaritaanka iyo horumarinta
5 shaqaaleysiin si ay wax cusub u abuuraan
6 Muuji waxa iman doona
6.1 [Sidoo kale akhri: 11 casharo ganacsi oo ka socda iPod aabbaha Tony Fadell]
7 dib uga fikir mustaqbalka
8 Maxay kula tahay?
Marka socodku adkaado...
Isagoo la hadlayay CNN sanado badan ka hor, Jobs wuxuu sharaxay qaabkiisa:
"Waxaan haysanay mid ka hor, markii xumbo dotcom dilaacday. Waxa aan u sheegay shirkadeena in aanu kaliya maalgalinayno si aanu uga baxno hoos u dhaca ku yimid, in aanu dadka shaqada ka cayrin, tacab badan na galiyay sidii aanu u keeni lahayn Apple. samayn waa la eryay. Waxaana rabnay inaan sii wadno maalgelinta. Dhab ahaantii, waxaan dooneynaa inaan kordhino miisaaniyada R&D si aan uga sii horayno tartamayaashayada marka hoos u dhacu dhamaado. Taasina waa sida saxda ah ee aan sameynay. Wayna shaqeysay. Taasina waa sida saxda ah ee aan sameyn doono waqtigan.
Marka hadda oo aan ognahay waxa Apple ay sameyn doonto, halkan waxaa ah muuqaal degdeg ah oo ku saabsan habab aad qaadi karto.
Dib u fakaraynta beerta gidaarada leh
Beerta gidaarka ee Apple waa la weeraray. Shirkaddu waxay ku qasbanaan doontaa inay samayso isbeddelo, laakiin waxay isku dayi doontaa inay khad ka samayso sirta macmiilka iyo xaqa ay macaamiishu u leeyihiin inay badbaadiyaan ka door bidaan ku habboonaanta tartanka.
In kasta oo aanay hadda u muuqan maamul-goboleedyadu in aanay ku qanacsanayn, haddana dooddu waxay leedahay faa’iidooyin badan, waxaanan ku qanacsanahay, in xitaa haddii la isku tanaasulo, la isu tanaasuli doono.
Apple waxay si fudud dib u miisaami doontaa soo jeedinteeda ganacsi si ay ula shaqeyso waxa soo haray. Laakin ma dhacayso dagaal la'aan.
Adeegyada dib u curinta
Waxaan dhamaanteen maqalnay sida udub-dhexaadka Apple ee dakhliga adeegyada ay uga dhigan tahay in qaybtan ganacsigeeda ay hadda tahay shirkad ka weyn IBM.
Waxaan sidoo kale maqalnay mala-awaal joogto ah oo sheegaya in shirkaddu ay doonayso inay ballaariso barnaamijkeeda cusboonaysiinta iPhone oo ay la socoto nooc ka mid ah soo jeedinta Adeegga-Apple-as-a-a-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg-adeeg'-macmiil-ku-fiirsasho' Tan hoosteeda, waxaad ku kireyn doontaa, ma lahaan doontid, qalabkaaga lacag siman bishiiba. Fikradda ayaa ah in qalabka Apple laga dhigo mid ay heli karaan dad badan, waxaana barnaamijku uu ka caawin doonaa Apple in ay kaxayso qalabka dib-u-warshadaynta maadaama badeecadaha EOL dib loo soo celiyo, macaamiishana ay kor u qaadaan.
Isbeddelkan adeegyada ayaa ka dhigaya ganacsiga mid adkeysi leh oo bixiya la saadaalin karo, dakhli soo noqnoqda si uu uga caawiyo ka gudubka caqabadaha dhaqaale ee aan la saadaalin karin.
Baaritaanka iyo horumarinta
Kharashaadka Apple ee cilmi-baarista iyo horumarinta (R&D) ayaa sii kordheysa. Waxay korortay toban laab intii u dhaxeysay 1999 iyo 2012, markaasoo ay gaartay $3.000 bilyan. Apple sanadka 2021 wuxuu ku kharash gareeyay $21.910 bilyan R&D.
Maalgelinta ayaa sii socota inay bixiso, iyada oo wax walba laga bilaabo hagaajinta ilaa iOS iyo macOS, qalab cusub, iyo qoysas cusub oo qalab ah oo imanaya, sida muraayadaha AR iyo Apple Car, ayaa ah natiijada. Laakiin Apple waa ilmo waqtigeeda, waxaanan ku kalsoonahay in qayb ka mid ah waxa shirkadu ay sahamin doonto ay noqon doonto xalal ka jawaabaya su'aalaha berrito: Sidee tiknoolajiyadu u wadi kartaa CSR? Sideed u abuurtaa habka wax soo saarka ee xidhan? Ka warran daryeelka caafimaad ee la kordhiyay iyo kuwa fog?
Ha ilaawin Processor-rada, Software-yada iyo adeegyada bixin kara dhammaan.
shaqaaleysiin si ay wax cusub u abuuraan
Apple ayaa caan ku ah inay iibsadaan ganacsiyo yaryar waqti ka waqti. Mararka qaarkood waxay sidaas u yeelataa si ay u hesho tignoolajiyada dabiiciga ah ee ay bixiso hay'adda la helay, halka marar kalena shirkadu ay jeceshahay in ay maalgeliso kooxo shaqaaleysiinta khibradda ay u leeyihiin.
Mar walba ma garanayno shirkadaha ay Apple soo iibsatay mardambe (mararka qaarkood ka dib), laakiin waxaynu ognahay tan: Apple waxay haysataa ilaa $ 200.000 oo kaash ah, taas oo macnaheedu yahay inay leedahay muruqa maaliyadeed ee loo baahan yahay si loo helo shirkado cusub, halka xasillooni darro dhaqaale ay ka dhigan tahay. hadda waxaa jira bartilmaameedyo wax-soo-iibsasho oo suurtagal ah suuqa iibsadaha. Lacagtu way sii socotaa marka cid kale haysato, sida VMware/Broadcom ay markhaati ka noqon karto.
Muuji waxa iman doona
Apple ayaa had iyo jeer si aad ah iyo aad u adag uga shaqeeya alaabooyin cusub oo aanay waligeed xaqiijin. Waxaan aaminsanahay in shirkaddu ay dhawaan tustay noocyada muraayadaha AR xubnaha guddigeeda agaasimayaasha.
Waxa kale oo aanu rumaysanahay in shirkaddu ay si weyn u maalgalisay Apple Car oo ay hadda dejinayso silsiladaha wax-soo-saarka iyo sahayda baabuurta.
Shirkaddu waqti badan ayey ku bixisaa ka hadalka caafimaadka, waxaana ognahay inay sii wadeyso cilmi baarista meelo kale, sida koronto-siinta wireless-ka, ePaper, 6G, iyo dhismayaal kale oo badan oo loo baahan yahay si loo naqshadeeyo badeecadaha mustaqbalka.
Waxaan si fudud u saadaalin karnaa soo noqnoqoshada alaabooyinka jira, oo ay ku jiraan dib-u-qaabaynta xagjirka ah ee waqti ka dib, laakiin sidoo kale waxaan filan karnaa gabi ahaanba qoysaska wax soo saarka cusub, oo ay suurtogaliyeen tignoolajiyada gaarka ah sida Apple Silicon iyo modem-ka Apple 5G ee soo socda.
[Sidoo kale akhri: 11 casharo ganacsi oo uu ka helay iPod aabbaha Tony Fadell]
dib uga fikir mustaqbalka
Waa maxay mustaqbalka? Apple dib uma eegin markii ay soo bandhigtay fikradda "hubka dhijitaalka ah" horaantii qarniga.
Xaruntani waxa ay ka turjumtay rajada wanaagsan ee falsafada macmiisha ee madaxbanaanida iyo isku filnaanshaha markaas baahsan; laakiin macmiilka berrito aad bay ugu dhowdahay inuu ku lug yeesho wax wada qaybsiga iyo masuuliyadda wadajirka ah.
Haddaba maxay yihiin jaangooyooyinka ku habboon aragtidan, sideese Apple (ama qof kasta) u sheegi karaa falsafadan alaab cusub oo loogu talagalay in lagu muujiyo adduunka berrito, halkii meeraha aynu shalay dhacnay?
Waxaan ognahay in Apple ay waqti ku bixiso ka fikirista, kaliya fiiri shaqada ay qabato. Inkasta oo dhaleecayn falcelin ah loo jeediyay ballanqaadyadan, cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in macaamiisha berrito ay aad u daneeyaan waxyaalahan oo ay diidi doonaan noocyada aan la wadaagin qiyamkan. Ka fikir dhaleeceynta Nike ay ku adkaysatay markii ay soo bandhigtay NFL quarterback iyo dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah Colin Kaepernick ee ololaha suuq-geynta. Dib u eegista ayaa laga yaabaa in ay keentay buuq badan, laakiin xaqiiqadu waxay ahayd in kalsoonida macaamiisha ee astaanta ay si aad ah u korodhay iibkuna uu kordhay 31%.
Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la qabto fariinta falsafada saxda ah oo la muujiyo.
Sideed u meel dhigi kartaa ganacsigaaga si uu u daboolo baahiyaha xaqiiqada berito ee bedeshay? Sida dib looga fikiro oo dib loogu habeeyo alaabtaada iyo adeegyadaada? Marka ay timaado tignoolajiyada, ugu yaraan, Shaqooyinka ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigeen diiradda markii uu u sheegay CNN:
"Arrimuhu si tartiib tartiib ah ayey u dhacayaan, waad ogtahay. Way imanayaan. Mowjadahan tignoolajiyada ah, waxa aad arki kartaa wakhti dheer ka hor inta aanay iman, oo kaliya waa in aad si xikmad leh u doorataa kuwa aad fuuli doonto. Haddii aad doorato si aan caqli-gal ahayn markaa waxay lumin kartaa tamar badan, laakiin haddii aad si caqli-gal ah u doorato waxay u dhacdaa si tartiib tartiib ah, waxay qaadataa sanado. [sano ka hor] waxay ahayd inaanaan doonayn inaan galno ganacsi aannaan lahayn oo aan xakameyno tignoolajiyada asaasiga ah, sababtoo ah waxay qarxin doontaa maskaxdaada.
Si aad u hesho mustaqbal wanaagsan, horay u eeg, dib ha u eegin, laakiin ha illoobin taariikhda, taas oo had iyo jeer ah tilmaame faa'iido leh.
Igu raac Twitter ama igu soo biir AppleHolic's bar & grill iyo Apple's MeWe group.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 IDG Communications, Inc.